किन बढ्दैछ महोत्तरीमा संक्रमण र मृत्यु ? « Salleri Khabar
किन बढ्दैछ महोत्तरीमा संक्रमण र मृत्यु ?
१८ भदाै, जलेश्वर – कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्न नदिन प्रदेश नं २ का सबैजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको भदौ सङ्क्रान्तिदेखि नै निषेधाज्ञा जारी छ । प्रदेशका आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्क्रमण प्रभावका आधारमा निषेधाज्ञा अवधि थप्दै लगेका छन् । यद्यपि यसैबीच कोभिड–१९ सङ्क्रमण र यसबाट मर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
युरोपा लिगमा टोटेनहम र एसी मिलान विजयी